House for Sale in Thaketa - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Houses for Sale in Thaketa
သာ​ေကတ၊ န၀ရတ္​လမ္​းသြယ္​၊ 20'x60'၊ BN-2, ​ေရ၊မီး၊ ဂရန္​​ေျမ။ (750)သိန္း
သာ​ေကတၿမိဳ႕နယ္​၊ န၀ရတ္​လမ္​းသြယ္​၊ 20'x60'၊ BN-2...
Ad Number S-10197407
သာကေတမြို့နယ်၊၄ တောင်ရပ်ကွက် မြို့မ လမ်းသွယ် ...
Phone No. To Contact Daw Than Than Htay Real Estate
Ad Number S-10183546
7ဈေးလမ်းမကြီးပေါ် ပေ20*60 ထောင့်ကွက် မြေပိုပါ ဂရန်အမည်ပေါက်။ ...
Ad Number S-10186019
သာကေတမှာ 40´×120' 2RC အိမ်ကျယ်ကျယ်ခြံကျယ်ကျယ်နဲ့အေးဆေးစွာနေကြမယ် အကျိုးဆောင်လက်ခံပါတယ်
Ad Number S-10186505
Ad Number S-10185933
Ad Number S-10176022
Ad Number S-10173297
Ad Number S-10173276
သာကေတ #ရှုခင်းသာမိန်းလမ်းမကြီးပေါ် ပေ40*60 အိမ်အပါ ဂရန်အမည်ပေါက် အရောင်း
6,700 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10173242